CIN Khabar अझै बनेन अछाम दरबार (अडियोसहित)
कमल रावल सोमबार, फागुन १९, २०७६, ०९:१८:००
सशस्त्र द्धन्दका समयमा २०५८ सालमा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीको आक्रमणका कारण ध्वस्त भएको अछाम दरबार अझै पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन ।
१८ बर्षको अवधिमा अछामका सबै सरकारी कार्यालयको पुनः निर्माणको काम पूरा भएपनि अछाम दरबार अझै बन्न नसकेको हो ।
२०५८ फागुन ४ गते राति माओवादीले अछाम सदरमुकाम मंगलसैन र व्यापारिक केन्द्र साँफेबगरमा एकैपटक आक्रमण गरेका थिए ।
घटनामा एकसय बढी सुरक्षाकर्मी र केही सर्वसाधारण मारिए । दुई दर्जन बढी सरकारी कार्यालय ध्वस्त भयो । सोही समयमा ऐतिहासिक अछाम दरबार पनि ध्वस्त भयो ।
मंगलसैन ३ का पदम सिंह यो आर्थिक वर्षको असारसम्म दरबार बन्ने आशा आफूहरूले लिएको बताउनुुहुन्छ ।
अछाम दरबार निर्माण गर्न पहल नभएको भने होइन । दरबार निर्माण थालिएको ११ बर्ष भइसकेको छ । तर अझै पनि दरबार निर्माणको काम पूरा भएको छैन ।
दरबारलाई पुनःनिर्माण र संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले कसरी पहल गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा मंगलसैन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बहादुर बोहरा सबै ठेकेदार, स्थानीय प्रशासन, शहरी विकास लगायतका निकायसँग आफूले समन्वय गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
आफूहरूले दबाब दिनमात्रै सक्ने र निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले समयमा दरबार नबन्दा जनताको अगाडी शिर निहुराएर हिड्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
मंगलसैनको बीचमा रहेको दरबार पुनःनिर्माणको कामले मंसिरबाट तिब्रता पाएपनि पूर्णता पाएको छैन । दरबार निर्माणको जिम्मा पाएको साउँद कन्ट्रक्शनका सञ्चालक जयबहादुर साउँद दरबार पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
काठका कारण काममा ढिलाइ भएको भन्दै उहाँले समयमा काठ आइपुगे यो वर्ष काम सकिने बताउनुभयो । अछाम आक्रमण पछि यसको पुनःनिर्माणको जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डोटीले पाएको थियो ।
अछाम दरबार आज भन्दा एकसय ६० बर्ष पहिले इँटा, मासको गारो र पूरै काठबाट बनेको थियो ।
पुरातात्विक संरचना भएकोले पहिले जस्तो थियो, त्यही नमुनामा निर्माण गर्दा दरबारका लागि ठूलो परिमाणमा काठको आवश्यकता परेको छ । तर काठको समस्या रहेको निर्माणमा संलग्न ठेकेदार बताउँछन् ।
सम्बन्धित ठेकेदारलाई ताकेताको लागि के पहल भइरहको छ ? डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख दिपेन्द्र श्रेष्ठ समयमा काम सक्न आफूहरू पनि लागिरहेको बताउनुहुन्छ ।
२०६५ सालमा सम्झौता भएर २०६७ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने दरबारको काम ११ बर्ष पुग्दा पनि पूरा नहुनु अछामी जनताका लागि बिडम्बना भएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६, ०९:१८:००